Nagu saabsan - Arex Industrial Technology Co., Ltd.
Qalabka Rubber ee Gawaarida Xamuulka
Tuuboyinka tubbo & tubbo
Tuubada Ku Xidhnayd Tuulada Ceramic
Tuubo jilicsan oo Rubber ah
Polyurethane Steel tuuboyinka
Rubber dahaarka steel tuuboyinka
Gariirka Media Screen
Polyurethane Baaritaanka Warbaahinta
Warbaahinta Baarista Rubber
Flotation Wear Qaybaha
Isku xirayaasha tuubooyinka
Tuubbada Birta Fudud
Iskudhisyada Ballaarinta Birta
Iskuduwida Balaadhinta Rubber
Sifee Qalabka Saxaafadda
Xidho Suumanka Wadada Adkaysi u leh
Suumanka Xamuulka & Rollers
Rubber kartoo & Qaybo caag ah
Shirkadda Arex Warshadaha Teknolojiyada waxaa la helay 1995, iyada oo ah shirkad madaxbanaan oo madax-bannaan oo wax-soosaara. Tan iyo markii aan la kaashanay shirkadaha Shiinaha oo dhan si aan u gaarsiino xiriiro wax soo saar sare leh. Maxaa ku bilaabmay ganacsi dayactir mashiin yar oo leh aragti ah inuu ka caawiyo dadka kale inay guuleystaan ​​oo ay jecel yihiin inay taageeraan warshadaha, waxay la korodheen koox heegan u ah inay ballaariyaan oo ay u adeegaan habab cusub, ka wanaagsan oo ka duwan. Gaar ahaan, Arex wuxuu matalaa Baytain caag iyo shirkad balaastig ah oo ka shaqeysa ganacsi caalami ah iyo maadaama ay daaqad gaar ah u tahay suuqgeynta adduunka. Baytain oo ah soo saaraha wadaniga ah ee wax soo saarka caagga iyo balaastigga ah ee Shiinaha qiyaastii 30 sano, oo ku takhasusay sahayda alaabada u adkaysta macdanta. Labada shirkadoodba waxay ka tirsan yihiin hal guddi maamul. Dhammaan kheyraadka ayaa la wadaagayaa midba midka kale. (Si aad u hesho macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Baytain: www.baytain.com)
Arex waa soo saare, ganacsade, been abuur, mishiin sameeye, soo dejiye iyo qeybiya qalabka warshadaha, qalabka iyo baahiyaha kale ee warshadaha. Waxaan ka faa'iideysaneynaa iskaashi wanaagsan oo lala yeesho shirkadaha kale ee qiimaha leh ee muddada dheer ka shaqeynaya aag ganacsi oo kala duwan oo ku yaal Shiinaha. Waxaa la cadeeyay inay bixinayso oo kaliya baahiyaha aan kor kusoo sheegnay laakiin waxay u adeegi kartaa shuruudo kale oo laxiriira macdanta iyo ganacsiga farsamada. Waxaan si qoto dheer u fahansanahay macaamiisheena iyo baahiyaha warshadaha iyo caqabadaha jira. Waxaan had iyo jeer ka fekereynaa adoo si firfircoon u xallinaya dhibaatooyinka isla markaana tirtiraya dhibaatooyinka isla markaana ujeedkeennu yahay inaanan weligood uga tegin macaamiisheenna shaki. Isku xirka xirfadlayaasha warshadaha leh calaamadaha adduunka hogaaminaya, waxaan kaheleynaa oo aan siineynaa noocyo kaladuwan oo caag ah, balaastig iyo alaab bir ah ujeedada warshadaha iyo xalka macdanta. Iyadoo loo marayo talobixinteena ku aaddan codsi farsamo iyo xallinta maareynta agabyada oo dhammaystiran waxaan ku kasbannay kalsoonida iyo taageerada ganacsiyado badan oo adduunka ah shirkadda macdanta iyo warshadaha la xiriira.
ISBADAL IYO ISKU SHAQAYN
Arex waxay abuurtaa iskaashiyo nolosha-dheer ah iyada oo waqti galinaysa abuurista iyo soo jeedinta xalal shaqsiyeed oo ku habboon baahiyaha ganacsi ee shaqsiyeed. La shaqeynta iskaashi lala yeelanayo macaamiisheenna xagga dhisidda bulshooyin horumar leh, caafimaad leh oo waara.
Uma tixgelinno nafteena kaliya wax-soo-saare kale maxaa yeelay taasi si fudud maahan waxa aan ku soo qaadanno; waxaan nahay shuraako ganacsi, oo naga go'an inaan hagaajino safarka. Saaxiibtinimo ayaa la sameeyaa, oo cilaaqaadyadu waa la dhisaa - Wada shaqee, wada guuleysta oo wada ciida.
Geedi socodka horumarka, Arex wuxuu is weydaarsaday lana shaqeeyay waaxyo badan oo caalami ah iyo machadyo cilmi baaris. Waxay naga caawisay hagaajinta naqshadeynta, wax soosaarka, dayactirka, howlaha iyo dayactirka injineernimada. Ku dhiirrigelinta shirkadda 'Arex' shirkadda heerka koowaad ee adduunka ee alaabada caagga ah iyo wax soo saarka polyurethane, taas oo ku habboon dhammaan noocyada jira ee mashiinka diyaarinta ee aagga macdanta.
Warshadaha Arex waxay diiradda saareen helitaanka heer sare ee naqshadeynta, soo saarista iyo keenista xirashada u adkeysiga iyo xallinta u adkeysiga xalka, qaybaha iyo la xiriirta qalabka diyaarinta macdanta. Waxaan bixinnaa xalal caag ah iyo xalalka polyurethane ee macdanta adag iyo codsiyada warshadaha kuwaas oo u baahan qaab cusub. Waxaan ku kalsoonahay in alaabtayada tayada iyo qiimaha tartanku ay si togan u saameyn doonaan macaamiisheenna. Hadafkeenu waa inaan noqono soo saarahaaga ugu fiican macdanta iyo xalalka codsiyada warshadaha.
Aragtida Arex waa inay noqoto isha lagu kalsoon yahay, kuna takhasustay xallinta caagyada caamka ah iyo xalalka polyurethane ee aagga macdanta adag iyo warshadaha adduunka.
Aynu tirtirno isku buuqsanaanta iyo dhibka kaydka la isticmaali karo. Hawlaheena cusub waxay ka dhigayaan dib u habeynta iyo la socoshada keydka mid fudud.
Ku xirnaansho daahfurnaan dhammaystiran, waxaan jecel nahay in isgaarsiinta xooggan ay ka dhigeyso xiriir guuleysta.
Waxaan ka warqabnaa in macaamiisheennu ay jawaabo degdeg ah ugu baahan yihiin, waxaan nahay kuwo firfircoon oo firfircoon jawaabtayada.
SOO SAARISTA Khabiirka
Maxaa loo xadiday? Waxaan waqti gelineynaa soo saarista waxa aad ubaahantahay.
Aynu ku caawinno! Waxaan ku faaneynaa inaan gacanta ku hayno khabiiro warshadeed si aan u helno xalka saxda ah markasta.
CINWAANQolka 505, D-block, MCC Grand Plaza, Jianhua Street, Degmada Yuhua, Magaalada Shijiazhuang, Gobolka Hebei, Shiinaha
WAQTIGA SHAQADA08:30 ~ 17:30 Malin ilaa Sabti